Be -TAX | 102 KARA
Io indray izao no resaka malaza tato ho ato. Ny mpampiasa azy dia mahalala avy hatrany, fa ny tsy mahafantatra kosa dia ny taxi be no tiana ho lazaina : dia ireo fiara mpitatitra. Manomboka rahampitso voalohan’ny volana FEBROARY mantsy dia nanapa-kevitra ireo rantsa-mangaika ny taxi-be fa hampiakatra ny saran-dàlana ho 500 ariary. Ny antony dia ny fiakaran’ny vidin’ny solika ho 3000 ariary mahery. Manoloana izany dia efa nanapa-kevitra hatramin’ny 2014 ny fitondram-panjakana fa hanome subvention na compensation ny mpitatitra. Tamin’ny taona 2015 anefa dia maro no tsy nahazo izany ary hatramin’ny volana novambra 2016 aza dia tsy nisy mihintsy. Avy amin’izany no niteraka io fampisondrotana ny saran-dàlana io indray.
MIKAIKAIKA ny vahoaka satria 400 ariary aza efa tsy zaka ka maika fa mbola hampiakarina indray.
Raha atao ny kajy tsotsotra dia 2000 ariary isan’andro izany no tsy maintsy lanin’ny olona iray ( misa sy mody atoandro misakafo, dia miverina miasa ny tolak’andro vao mody ny hariva ). Raha miampy ankizy mianatra telo izany dia tafakatra 8000 ariary ny saran-dalana ISAN’ANDRO n’ity fianakaviana ity. Izany hoe ao anatin’ny iray volana dia efa mananika ny 160 000 na 6 alina sy iray hetsy ariary ny saran-dàlana fotsiny. Mitovy amin’ny karama farany ambany na smic izany any Frantsa : dia aiza intsony ny vola ho hanina, andoavana hofan-trano sy ny kojakoja maro samihana. Manginy fotsiny raha misy marary dia efa tsy azo saiantsainina ny vola mety ilaina amin’ny fitsaboana, fa dia efa ny varavaram-pasana no miandry.
Voatery tsy maintsy MIZAKA NY TSY ERAN’NY AINA anefa ny vahoaka.
Ary ny tena loza koa dia ity : ny mpitatitra dia tsy mikarakara firy ny fiara fitaterana ary ny mpandeha dia atao fatra-saonjo mihintsy rehefa betsaka ny mpandeha. Koa ankoatra ny hazo eny anelanelany izay antsoiny ny mpanadroadro hoe : ilay bois de rose dia mbola misy koa ny mitsangana : taingim-be io.
KOA AIZA IHANY RE IZY ITY E ? hoy ny fanontanian’ny maro. Ny fanjakana sy ny mpitatitra tsy mahita ny marimaritra iraisana dia samy miziriziry amin’ny toerana misy azy. Dia tonga amin’ny hiran’ny Nanahary hoe : » MIVARALILA ny isan-tsokajiny, dia ny VAHOAKA no mihinan’ny TADINY » Ary raha ny amin’izao fotoana izao dia tsy ny tadiny ihany no hanin’ny vahoaka fa ny zavatra hafa koa.
1 février 2017 - 15 h 22 min Social 386 vues